Fivahinianana tany Shina :: Nampitolagaga ny sinoa ry Rakoto Frah Junior • AoRaha
Fivahinianana tany Shina Nampitolagaga ny sinoa ry Rakoto Frah Junior
Herinandro nifampizarana zavakanto. Nahaliana sady nankamamian’ny olona maro ny kanto natosaky ny tarika Rakoto Frah Junior, nandritra ny fandraisan’izy ireo anjara tamin’ny “Festival de culture et d’art de Nanjing”, tany Chine, ny 9-13 mey lasa teo.
Fito ireo mpanakanto niakatra an-tsehatra nampahafantatra ny lokon’ny zavakanto malagasy tany an-toerana. Samy nahazo tehaka avy amin’ny mpijery avokoa ny hira, soradihy, fitendrena zavamaneno natolotr’ity tarika malagasy ity.
Nomena lanja sy nisongadina tao anatin’ny hetsika kosa ny seho manokana nataon’ireo mpanakanto malagasy mitondra ny lohateny hoe: “Riba sy fomba eto Madagasikara”. Niavaka ny fanehoan’ny tarika ny vakodrazana, toy ny “Vory ve tsena”, “Arily” ary ny “Afindrafindrao”. Niarahan’izy ireo tamina vondrona mpihira sy mpandihy avy ao Nanjing izany.
Samy nahitana ny lokon’ny kanto nentin-drazan’ny firenena roa tonta, malagasy sy sinoa, teny an-tsehatra. Ankoatra ny fanaovana fampisehoana, sady nifampizara traikefa tamin’ny mpanakanto sinoa ry Rakoto Frah Junior no nitsidika ireo toerana manan-tantara samihafa tao Nanjing.
Sarimihetsika :: Haseho any Etazonia ny tantara “Razana”